Aedis Fabric Duct teti-dratsy ka mivarotra lamba rivotra rafitra (more matetika fantatra amin'ny anarana hoe Fabric ducts / duct ba kiraro / sox) volavolan-maimaim-poana ho an'ny rivotra fizarana amin'ny karazana rehetra efitra sy ny fampiharana.
Aedis Fabric Duct dia iray amin'ireo voalohany duct mpanamboatra lamba naorina tamin'ny 2003 ary nanomboka tamin'izay dia nitombo lasa lehibe indrindra mpanamboatra lamba duct ao Shina.
Aedis Fabric Duct Faritany Qingdao, Shina ary fitaovana amin'ny nandroso kajy rindrambaiko za-draharaha manampy ny injeniera mba simulate ny vahaolana sy ny hanaterana ny fanohanana ara-teknika tsara indrindra ao amin'ny orinasa duct damba. Ity birao Niorina tamin'ny 2003, ary nanomboka teo dia nisy fanitarana soa aman-tsara ny fandrakofam-baovao manerana an'i Shina, ary tamin'ny taona 2012, dia manomboka ny hanondranana ny lamba rivotra duct manerana izao tontolo izao amin'ny alalan'ny HVAC sasany Manufacturers solontenan'ny.
Mampiasa format manan-tompo 3D rindrambaiko hanao ny mari ny rivotra rafi-pielezana. Na inona na inona ny endrika pitsiny ny rafitra tsara miantoka fanaterana ny tanjona sy ara-potoana. Ara-teknika manovaova ny rafitra miaraka amin'ny lafiny tontolo iainana sy ara-toekarena ireo tombontsoa fotsiny ny sasany amin'ireo antony mahatonga ny rivotra rafi-pielezana no nahazo lazan'ny tamin'ny mpanao mari-trano, mpandraharaha sy ny mpiantoka maneran-tany, izay matetika no niova fo mahazatra vy ducting ho lamba rafitra. Na inona na inona izay azo atao amin'ny vy azo atao amin'ny lamba.
Lamba rivotra pielezana dia ampahany mitombo andro fifadian-kanina. Ny maha-maivana ny rafitra FabricAir mahatonga azy io tsara ho maro ny fampiharana incl. vonjimaika rafitra, toy ny lay sy ny efitrano fampirantiana, ary efa misy trano retrofitting. Ny anti-toetra manimba tsikelikely ataovy eo amin'ny fanatanjahan-tena be mpitia Arenas, natatoriums, orinasa lakozia ary tsy ny kely indrindra sy ny hatsiaka hihena fampiharana, izay mahazatra vy ducting manana fahadisoana lehibe. Ny fananana madio sy ny anti-microbial safidy no mahatonga azy ambony ao amin'ny fanodinana sakafo, fitehirizana sakafo sy ny fampiharana ara-pitsaboana. Ary ny fampiononana namorona ny fikorianan'ny bespoke modely manao ny toe-draharaha an-trano ambony noho ny mahazatra rafitra vy.
Mampiasa lamba ducting dia midika hoe mamorona ny rivotra pielezana rafitra amin'ny lafiny rehetra, na halavan'ny ary naniry diameters rehetra. Tsy misy fetra rehefa famavanin'ny tanana, reducers ary handray-offs. Na inona na inona no ho ataony eo amin'ny vy ducting azo atao amin'ny lamba, ary avy eo ny sasany. Tahaka ny lamba ducting tsy manimba tsikelikely, dia misy maro ny fampiharana izay rivotra lamba pielezana rafitra no ambony noho ny mahazatra ducting vy. Fabric ducts dia tsy dia mitabataba, condensation maimaim-poana sy ny lanjany ny ampahany kely ihany ny vy ducting.
Duct loko azo mifanaraka amin'ny endrika anatiny sy tetika azo atao pirinty Logos sy ny maro hafa teo amin'ny faritra. Ducts atao mihitsy aza ny ho voavonjy amin'ny coating manokana ohatra menaka ody, anti-microbial fitsaboana, anti-voasakantsakan'ny fitsaboana sy ny sisa. Hahafantatra bebe kokoa momba ny rafitra nanaovana zavatra maro.
Mahatsara ny lamba iray hafa rafitra ny metaly ducting no avo lenta ny occupant fampiononana ao ventilated faritra. Amin'ny alalan'ny fampiasana lamba dia mamela ny injeniera mba hanangana ny tsara indrindra ho an'ny rehetra mikoriana ny modely nomena toerana tsy misy fivoahana; izany tsy misy condensation, tsy misy tabataba, ary tsy misy maty faritra. Experience nampiseho fa ny fampiasana FabricAir pielezana mangatsiaka rafitra in-piasana koa dia manana ny soa ny marary vitsy kokoa ny andro amin'ny mpiasa, ary ny anti-manimba tsikelikely sy ny maha ara-pahasalamana ny rafitra ducting mahatonga azy io ambony tamin'ny hatsiaka no matin'ny hatsiaka fotodrafitrasa toy ny hena fanodinana zavamaniry.
Lamba rivotra pielezana rafitra dia fantatra koa amin'ny hoe rafitra lamba rivotra, lamba ducts, duct ba kiraro, na sox, ary malaza noho ny manovaova sy ny fototra soa toy ny volavolan-maimaim-poana, condensation-maimaim-poana, noiseless, harafesiny-malalaka sy ara-pahasalamana. FabricAir pielezana manarona ny rafitra isan-karazany ny fampiharana incl. sakafo, fanatanjahan-tena, indostria, antsinjarany sy ny toerana-bahoaka, fanabeazana, sy ny fampiononana birao amin'ny ankapobeny, ka ny indostria ara-pitsaboana. Mianara bebe kokoa momba ny fampiharana.